काभ्रे।जिल्लाको मण्डनदेउपूर नगरपालिकाले आजदेखि ५० बेडको क्वारेन्टाइन संचालनमा ल्याउने बताएको छ ।वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता डिल्लीप्रसाद आचार्यले दिएको जानकारी अनुसार वडा नं. ६ को महादेव प्रावि र वडा नं. ७ को कालीदेवी प्राविमा ठाउँ खाली गराई क्वारेन्टाइन बनाउन लागिएको हो । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा यस सम्बन्धि जानकारी उल्लेख गरेका छन् । साथै नगरपालिकाले १२ वटै वडामा विदेशबाट आएका नागरिकको पहिचान गरि उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्न लागिएको पनि जनाएका छन् । उनले लेखेका छन् , विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा यस नगर पालिकाभित्र र नगरपालिका बाहिरबाट भित्रने क्रममा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम लाई नगरपालिकाले गम्भिरता पूर्बक लिइ ५० बेडको क्वारेन्टाइन तयार गर्न लागिरहेको छ । मिति २०७६/१२/१३ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरि वडा नं ६ को महादेव प्रावि र वडा नं ७ को कालिदेवी प्राविमा क्वारेन्टाइनको लागि ठाऊँ तयार गर्न लागिएको जानकारी गर्दछु । बिदेश लगायत अन्य ठाउँबाट फर्कि आएका व्यक्तीहरुलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने र बिरामी वा कोरोनाको लक्षण देखिएमा तत्काल अस्पताल पठाउने तयारी समेत नगरपालिकाले गरेको छ। यस संकटको घडीमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई २४ सै घण्टा सूचनामा रहि आवस्यक पर्दा सहयोगमा उपस्थिति हुन अनुरोध गरिन्छ । नगर प्रवक्ता डिल्ली प्रसाद आचार्य
१३ चैत्र २०७६, बिहीबार ०९:२९
जिल्लाको मण्डनदेउपूर नगरपालिकाले आजदेखि ५० बेडको क्वारेन्टाइन संचालनमा ल्याउने बताएको छ ।
वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाका प्रवक्ता डिल्लीप्रसाद आचार्यले दिएको जानकारी अनुसार वडा नं. ६ को महादेव प्रावि र वडा नं. ७ को कालीदेवी प्राविमा ठाउँ खाली गराई क्वारेन्टाइन बनाउन लागिएको हो । उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा यस सम्बन्धि जानकारी उल्लेख गरेका छन् । साथै नगरपालिकाले १२ वटै वडामा विदेशबाट आएका नागरिकको पहिचान गरि उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्न लागिएको पनि जनाएका छन् ।
उनले लेखेका छन् ,
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा यस नगर पालिकाभित्र र नगरपालिका बाहिरबाट भित्रने क्रममा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम लाई नगरपालिकाले गम्भिरता पूर्बक लिइ ५० बेडको क्वारेन्टाइन तयार गर्न लागिरहेको छ । मिति २०७६/१२/१३ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरि वडा नं ६ को महादेव प्रावि र वडा नं ७ को कालिदेवी प्राविमा क्वारेन्टाइनको लागि ठाऊँ तयार गर्न लागिएको जानकारी गर्दछु । बिदेश लगायत अन्य ठाउँबाट फर्कि आएका व्यक्तीहरुलाई १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने र बिरामी वा कोरोनाको लक्षण देखिएमा तत्काल अस्पताल पठाउने तयारी समेत नगरपालिकाले गरेको छ। यस संकटको घडीमा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई २४ सै घण्टा सूचनामा रहि आवस्यक पर्दा सहयोगमा उपस्थिति हुन अनुरोध गरिन्छ ।
kavre, mandan deupure
Prevलकडाउनको आज तेस्रो दिन, सडकहरु सुनसान
हङकङका एक नेपालीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणNext
काभ्रेमा मतदानस्थल र केन्द्रसंँगै मतदाता नामावली अद्यावधिक अभियान
बनेपामा ६५ जना संक्रमित पुगेपछि ५० शय्याको आइसोलेशन कक्ष तयार, क्वारेन्टिनहरु रित्तिँदै
संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि काभ्रेका ६ नगरपालिकामा उच्च सतर्कता